12:35 AM ဟိုဟို ဒီဒီ No comments
9:51 PM ရေးဆွဲဖြစ်တဲ့ပုံတွေ4comments
4:06 AM ရေးဆွဲဖြစ်တဲ့ပုံတွေ No comments
3:40 AM ကျွန်မရဲ့ အကြောင်း4comments
ဦးအောင်သန်း ဒေါခင်မေသစ်တို့၏ သားသမီးခုနစ်ဦးအနက်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အမည်ရင်း ရူပအောင်ပါ။ ပျဉ်းမနားမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်ပင်မတက္ကသိုလ်မှ B.Sc. (Hons.) Zoology ဘွဲ့ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၄ မှာ ပန်အနုပညာမဂ္ဂဇင်းမှာ နိုင်ငံတကာအနုပညာသတင်း နှင့် ဆောင်းပါးတွေ စတင်ရေးသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇီဝကမဂ္ဂဇင်းမှာ ဆေးပညာဆိုင်ရာ သတင်း ဆောင်းပါးများ၊ Perfect မဂ္ဂဇင်းမှာ ဘောလုံးဆောင်းပါးများ၊ ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားခြင်းဖြင့် စာပေနယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Emperor မဂ္ဂဇင်း၊ နရီသစ်၊ လှိုင်းသစ် နဲ့ အခြား မဂ္ဂဇင်းဂျာနယ်တွေမှာလည်း ရေးသားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၆မှာမှသတင်းဆောင်းပါးတွေ မဟုတ်ဘဲ ရသအရေးအသားလေးပါတဲ့ “ကားတစ်စီးထဲက ကျွန်မ ရဲ့ ညတွေ”ဆိုတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဝတ္ထုတိုကို ဘာသာပြန်ရေးကြည့်ခဲ့တာပါ။ နာမည်ကျော် ဘလောဂ့်ဂါ၊ စာရေးဆရာဖြစ်လာခဲ့တဲ အိုးအိမ်မဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦး ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ။
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ခြောက်ရက်ငါးညတာ အိမ်ထဲမှာ ၀တ္ထုတိုဖြင့် ပင်ကိုရေးများ စတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၁- အွန်လိုင်းရွှေဝတ္ထုတိုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ (SBOGS) မှ ပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ် အွန်လိုင်း ၀တ္ထုတိုဆု မှာ “စကားလုံးတွေထဲက နင်ဟာ … ငါ့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကမ္ဘာ” ၀တ္ထုတို နဲ့ တတိယဆုရခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှ ထုတ်ဝေသော မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်များတွင်လည်းကောင်း ဘာသာပြန်ပင်ကိုရေး ၀တ္ထုဆောင်းပါးများ ရေးသားလျက်ရှိပါတယ်။
ယခု ကလောင်အမည်တွေက ဖြိုးဖြိုး၊ မဉ္ဇူရီ၊ နေခြည်ခ တို့နှင့် ရေးသားနေပါတယ်။
စာရေးခြင်းကို နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်သွားခဲ့ပြီမို့ စာမျက်နှာပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဘလောဂ့်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်တိုင်း( နေမကောင်းတဲ့အချိန်ကလွဲ့လို့) သုတ ရသ စာတွေ ကြိုးစားရေးသွားမှာပါ။
“ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး ရေးစရာတွေချည်းပဲ .... ကြိုးစားပြီး ရေးရပါဦးမယ်” ပေါ့။
ဝေဖန်အကြံပြုချင်တာတွေ ရှိရင်၊ လိုအပ်ချက်တွေရှိရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စကားလုံးတွေ ရေးချသွားနိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေရဲ့ စကားလုံးလေးတွေက စာရေးသူတွေအတွက် အင်အားပါ။
ဘလောဂ့်စလုပ်ဖြစ်ခါစက ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ ကမ္ဘာမို့ ဖျက်မပြစ်ရက်ဘူး။
ကျွန်မရဲ့ ကမ္ဘာ က မကျယ်လှပါဘူး၊ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းပါ၊
ကျွန်မ ငယ်ငယ်က ပျဉ်းမနားက အိမ်ကျယ်ကြီးမှာ နေခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေက
အဲဒီအချိန်တုန်းက ပျင်းစရာလိုပဲ ။
အကိုနဲ့ စစ်သားရုပ်တွေနဲ့ ဆော့ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကို ခုတော့သတိရမိပါတယ်
ကျွန်မ က မိသားစုမှာအငယ်ဆုံး ၊ ဆိုးတော့မဆိုးလှဘူးထင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်ကဓါတ်ပုံရိုက်ရင် ၊ ထားရင်ထားသလို နေတတ်လို့
အရင်တုန်းက ကြိုက်ခဲ့တာတွေ ...ခု မကြိုက်တော့ဘူး ။
အရင်က နွားနို့သိပ်ကြိုက်တယ်... ခု လုံးဝသောက်လို့မရတော့ဘူး ။
တခြား ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းသွားတာတွေ အများကြီးပါပဲ ။
ကျွန်မ အကိုနဲ့အမ တွေကတော့ ကျွန်မကို ဟာသဥာဏ်ရှိတယ်လို့ပြောကြတယ် ။
တစ်ခါတစ်ခါ... ကျွန်မက ဘာရယ်မဟုတ် ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြောလိုက်တာ ကို.. သူတို့မှာရီလို့မပြီးကြဘူး ။
ကာတွန်းဆွဲရတာ ကြိုက်တယ် .. ဒါပေမဲ့ ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ကာတွန်းရုပ် ခုထိ မဖန်တီးနိုင်ဘူး ။
အရင်ထွက်ခဲ့ဖူးသေးတဲ့ .. ကျန်းမာရေး ဂျာနယ် (Future Health) မှာ ဗက်တီးရီးယား ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့
ကာတွန်း ဆွဲခဲ့ဖူးတယ်... အဲဒါကို ကြိုက်ပေမဲ့ ..ခုထိ ကာတွန်းမဆွဲဖြစ်သေးဘူး ။
ရီစရာတစ်ခုခုတွေ့ရင်တော့ ကာတွန်းဆွဲရရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီး.. စာရွက်နဲ့မှတ်ထားလိုက်တယ် ။
ကျွန်မအလုပ်က designer ပါ .. web development company တစ်ခုမှာ
ခု ကျွန်မ ရဲ့ တို့တို့တိတိ အလုပ်တွေက
Emperor Men Magazine မှာ Digit အမည်နဲ့ ... Foreign Music Band တစ်ခု လစဉ်ရေးဖြစ်တယ်...
Ziwaka Health Magazine မှာ နိုင်ငံတကာဆေးပညာသတင်းတွေရေးဖြစ်တယ်... ဖြိုးဖြိုး ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့...
နောက် ... Perfect Magazine မှာ ... Spring အမည်နဲ့ .. ဘောလုံးစတားတစ်ယောက်အကြောင်း ... လစဉ်ရေးဖြစ်တယ်။
ဘောလုံးပွဲကြည့်ရတာလား.. အင်း ..သိပ်ကြိုက်ပါတယ် ။
ကျွန်မစိတ်သိပ်ညစ်လာတဲ့အခါ ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲ ကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ်စိတ်ညစ်တာလေးတွက သေးသေးလေးဖြစ်သွားတယ်။
ပြီးတော့ ပျောက်သွားရော ..
ငယ်ငယ်က Nu Metal သီချင်းတွေ ကြိုက်တယ် ၊ခပ်ပြင်းပြင်းတွေ
ခု R&B သီချင်းတွေလဲ ကြိုက်ပြန်ရော ၊
အရင်က နားထောင်လို့မရတဲ့ Rap ၊ Hip Hop တွေလဲ ကြိုက်လာတယ်။
Eminem ရဲ့ Mocking Bird သီချင်းဆိုလဲ သိပ်ကြိုက်တယ် ။
အသံအိုးကောင်းကောင်း မဒီတွေ ပညာသားပါပါ ဆွဲဆွဲငင်ငင် ဆိုတတ်တဲ့ သီချင်းခက်ခက်တွေ ကိုတော့ အရင်ကလဲ မကြိုက်ဘူး၊ အခုလဲ မကြိုက်ဘူး။
စာအုပ်ဖတ်ရတာကြိုက်တယ်၊ ဘာသာပြန်စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့၊ ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့
စာအုပ်မှာ သုခမြို့တော် ကြိုက်တယ်၊ ကိုဗော့စကီး (Stephan Kovalski) လို လူတစ်ဦး မြန်မာနိုင်ငံမှာ လိုအပ်နေပြီလို့ထင်တယ်၊
အလှပြင် ပစ္စည်းလေးတွေလဲ ကြိုက်တာပါပဲ ။
မိုးရွာတာကို ကြိုက်ပေမဲ့ အေးတဲ့ရာသီဥတု က ကျွန်မကို ပြဿနာ ရှာတော့ မကြိုက်ချင်တော့ဘူး ။ ။
Phyo Phyo On G+